Ngwa - Shenzhen XJCSENSOR Technology Co., Ltd.
XJCSENSOR nwere ahụmịhe bara ụba maka ule nke ihe na akụkụ maka ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Fọdụ ihe atụ gụnyere:
Ojiji nke Ulo Robotic
Sensor bụ modul kọmputa na robot nwere ọgụgụ isi. XJCSENSOR si nkwonkwo torque mmetụta na ọtụtụ-eji na nkwonkwo nke nwere ọgụgụ isi robot. Enwere ike itinye ya na nso mpempe akwụkwọ na iko mmiri nke ogwe aka iji nyere robot aka izere ihe mgbochi, nyere aka n'ịchọpụta eziokwu ahụ na ihe ahụ jidere na-ada n'oge mmegharị ahụ, ma ọ bụ enwere ike itinye ya na robot na-eje ije, robot na-ekwenye ekwenye, na mkpọchi mkpọchi igwe.
XJC sensor nwere ọtụtụ ngwa dị n'ụgbọ ala ahụ, yana mmepe nke teknụzụ anyị, ihe mmetụta ahụ ga-eji nwayọọ nwayọọ na-enwe ọganihu, na obere nha, ntụkwasị obi dị elu, nnukwu uche, mkpebi dị elu, mmepụta dijitalụ na ihe ndị ọzọ.
XJC mgbali mmetụta button ụdị & S ụdị a na-achọpụta na ike ọdụdọ ma ọ bụ nsogbu na-arụ ma ọ bụ guzogide lekwasịrị, dị ka pịa igwe, elu kpọmkwem Punch pịa, ihe onwunwe ule igwe, akpaaka na ngwá na akpaka akara usoro, Metallurgical ntụ ntụ ụlọ ọrụ extrusion ịkpụzi akụrụngwa.
Site na mmepe nke ahịa akụrụngwa ahụike, a na-etinye ihe dị elu maka iji ihe mmetụta nrụgide na ụlọ ọrụ ahụike. Uru ndị dị na oke nkenke, ntụkwasị obi, nkwụsi ike na obere obere nke usoro D na XJCSENSOR bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na isi ọrụ ahụike. Ngwa ngwa a na-ejikarị akwa akwa, nfuli sirinji, akụrụngwa ahụike, igwe eji arụ ọrụ, igwe B-ultrasound, wdg.
Uzo ohuru ohuru enwebeghị oganihu. Ngwa nke Xin Jingcheng mgbali mmetụta na ubi nke ọhụrụ ume na-agụnye: XJC-S08 & XJC-D150 na-eji na mgbali akpụ igwe maka adụ mkpọ batrị, na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ pịa, ike batrị n'ịkpụzi igwe; erughị ala mmetụta na-etinyere winder, mkpuchi Akwa igwe; XJC-D01 etinyere mmiri mmiri ọgwụ ngwa, wdg
Ihe mmetụta XJC n'ihi nzaghachi ngwa ngwa ya, mkpebi dị elu, dị mfe iji nweta mmụba na-abụghị kọntaktị, oke nkenke Ezigbo ntụkwasị obi, jikọtara ya na obere obere ya, ịdị arọ ya, obere ike ya na ijikọta ya n'ụzọ dị mfe, ọ na-enyere aka ịchọta oge na ịnagide nsogbu. ndị ahụ dị mfe ịme na ọrụ igwe ọrụ ugbo, ma nwee ike ịkwalite mmepe nke akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa ma hụ na akụrụngwa akụrụngwa. Dabere na nke ojiji, belata ike oriri, na nchekwa na ike na akụrụngwa.
XJC S-ụdị mgbali mmetụta bụ akụkụ dị mkpa nke injinịa ígwè ọrụ ụlọ ọrụ; ya ngwa tumadi na-agụnye: nke mbụ bụ njikwa nke engine na-arụ ọrụ ọnọdụ; nke abuo bu ichikota usoro hydraulic; nke atọ bụ njikwa nke arụmọrụ zuru ezu nke igwe injinịa; Ugbo ala, cranes, klọb elu, kran, wdg.
XJC D usoro ibu cell bụ akacha eji nrụgide ihe mmetụta na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ngwa ya a kapịrị ọnụ bụ na akụrụngwa akụrụngwa, akụrụngwa nkwakọ ngwaahịa, ịtụle na ịhazi ngwa, wdg.
XJC ihe mmetụta bụ ihe mmetụta kachasịsịsịsịsị na ntanetị nke akụrụngwa akpaka. Ọ nwere ike ịchọpụta ọnụọgụ na ike axial mgbe ị na-achọpụta torque. Ngwa ndị a kapịrị ọnụ gụnyere: igwe ntanetị dijitalụ, igwe eletriki eletriki dijitalụ, mmechi mmechi mmechi mmechi na-eme ka mgbidi sie ike, wdg.